Iingcebiso eziPhezulu zokuBhala iMiyalezo ephumeleleyo yeSMS | Martech Zone
Iingcebiso eziPhezulu zokuBhala iMiyalezo ephumeleleyo yeSMS
NgoLwesibini, Februwari 11, 2014 NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari, 2017 Douglas Karr
Impendulo kunye namaxabiso okuguqula imiyalezo ebhaliweyo ngesixhobo esiphathwayo ziyamangalisa. Kwaye kuphela kwendawo yokuthumela imiyalezo kwindalo yonke kuba onke amanye amaqonga anokuhluza okungafunekiyo kunye nemicimbi yokuhambelana. Oku infographic evela kwi-TextMarketer yalatha kwizinto ezimbalwa eziphambili zomyalezo wokuthengisa osebenzayo weSMS:
Qala ngokubamba ingqalelo ukwenza ukuba umfundi azibandakanye kwaye aqhubeke nokufunda.
Sukusebenzisa imiyalezo efinyeziweyo -Abasebenzisi abaninzi abahambahambayo abayiqondi.
Yigcine imfutshane Isicatshulwa esinye ngabalinganiswa abali-160 (nangona ungathumela imiyalezo ebhaliweyo emininzi).
Baxelele ukuba ungubani - Abathengi abazi apho uvela khona umyalezo ngaphandle kokuba uwubhengezile.
Baxelele ukuba mabenze ntoni -Umnxeba onamandla wokuthatha amanyathelo ngundoqo ekwandiseni ukusebenza kwemiyalezo yakho.
tags: kwi-infographicumyalezo ophathwayoumyalezo ophathwayoi-SMSumyalezo we-smsumyalezo wegamauphawu lokubhaliweyo
Yenza isigqibo ngoku: Bamba kunye neNgxelo ngeNgxelo